Kolontsaina sy soatoavina - Ellicott Dredges
Kolontsaina sy soatoavina
Manao dredge izahay hananganana tontolo tsaratsara kokoa. Manamboatra sy manamboatra ireo fitaovana ilaina izahay hiarovana ny tontolo iainana, hanatsarana sy hitazomana ny lalan-drano azo antoka ary hitrandrahana harena an-dranomasina ho fampandrosoana ara-toekarena.
Izahay dia manangana fikambanana izay reharehanay fa anisan'ny, izay itomboanay, hahombiazantsika ary hifaneraserantsika ny fiadanan'ny tsirairay. Manetry tena amin'ny fahombiazana izahay ary miasa hatrany hanatsara. Mihoatra ny fananana ara-batana na fananana ara-tsaina, ny orinasa dia fitambaran'ny fivoaran'ny tsirairay amintsika. Ho setrin'izany, samy mandray anjara amin'ny fananganana sy famolavolana ny orinasanay ny tsirairay. Fantatsika ny fomba hamoronana lanja eo amin'izao tontolo izao ny orinasa, ary azontsika tsara fa ny anjara andraikitsika manokana dia mitondra ny soa lehibe kokoa.
Mino izahay fa ny tombom-barotra dia tsy ny lalao farany tokony hatao laharam-pahamehana amin'ny zavatra hafa rehetra. Ary ekeo fa tianay ny hampitombo ny tombom-barotra hampiasainay amin'ny hoavinay hanompoana ny mpiasanay, ny mpanjifantsika ary ny vondrom-piarahamoninay.
Finoana mino sy soatoavin'ny toro-lalana
Ekipa iray isika
Ny fanoloran-tena amin'ny orinasa amin'ny mpanjifa
Fiandraiketana - hiasa am-pahamendrehana ho tombontsoan'ny orinasa
Manahy momba ny asantsika
Taratasy ahazoana fepetra
Mahomby ny fanapahan-kevitra mifototra